Shaqaale ka tirsan Bisha Cas oo la afduubtay! – War La Helaa Talo La Helaa
DEG DEG+FIIRSO: Somalia oo garab ka heshay Itoobiya & Eriteriya iyo wel wel soo…
FIIRSO: P/land oo war culus ka soo saartay dagaalka Gobolka Sanaag una digtay…
Akhriso: RW Kheyre oo safiiro cusub magacaabay & shaqsiyaad S/land ka soo…
Shaqaale ka tirsan Bisha Cas oo la afduubtay!
By madoobe	 On Aug 9, 2018
Rag hubeysan ayaa shaqaale ka tirsan Hay’adda Bisha Cas waxa ay gelinkii dambe ee maanta ka afduubteen inta u dhaxeysa magaalada Baydhabo iyo degaanka Awdiinle oo ka wada tirsan gobolka Baay.
Warkan waxaa xaqiijiyay Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuuradiin Abuukar Gacma, wuxuuna sheegay afduubkan inay ku tuhmayaan dagaalyahanada Ururka Al Shabaab.
Shaqaalaha samafal ee la afduubtay oo watay gaari NOAH ayaa waxa ay gaarayaan ilaa Shan qof oo Saddex ka mid ah ay yihiin Dumar, halka labada kalena ay yihiin Rag, wuxuuna afduubkooda si gaar ah uga dhacay Tuulada Busleey oo dhawr iyo 20-KM ujirta magaalada Baydhabo.
Shaqaalaha afduubka lagula kacay ayaa waxa ay ku sii jeedeen degaanka Awdiinle oo qiyaastii 30-KM ujira magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay ugu socdeen hawlo shaqo, sida ay sheegeen masuuliyiinta Koonfur Galbeed.
Halka uu afduubka ka dhacay kuma sugna ciidan dowladeed iyo Shabaab toona, balse sida la sheegay Al Shabaab waxa ay doonaan ayay halkaasi ka sameyn karaan, iyaga oo ku yimaada qaab qarsoodi ah, sida ay ku warameen dadka degaanka.
Waxaa socda dadaalo lagu raadinayo shaqaalaha la afduubtay oo dhammaantood ah Soomaali, saraakiisha Hay’adda Bisha Cas oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay inoo sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin afduubkan loo geystay shaqaalahooda.
Taliyaha Asluubta “Ciidan aan Boolis aheyn kama hawlgeli karaan Muqdisho
Sawirro:Muqdisho Shil gaari oo dad ku dhinteen oo ka dhacay Muqdisho!
DEG DEG+FIIRSO: Somalia oo garab ka heshay Itoobiya & Eriteriya iyo wel wel…
Xuseen Madoobe	 May 23, 2019 0
FIIRSO: P/land oo war culus ka soo saartay dagaalka Gobolka Sanaag una…
Sababaha keena dhibaatooyinka dhallinyarada ku heysta dalka gudihiisa…
XOG+FIIRSO: Halkuu ka yimid Ninkii isku qarxin rabay Guraceel ee…
DEG DEG+FIIRSO: P/land oo shir deg deg ka leh Xaaladda G/Sanaag,Kenya…
DEG DEG+FIIRSO: Maleeshiyaad taabacsan P/land oo goordhow la wareegay…
DEG DEG+FIIRSO: Donald Trump oo wacad ku maray inuu dagaal ku qaadayo…
DEG DEG+FIIRSO: Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Muqdisho ka dib…
FIIRSO: War cusub oo ka soo yeeray guddi ka tirsan Baarlamaanka
DEG DEG+FIIRSO: Itoobiya oo qorsheyneysa iney isku soo dhoweysay Kenya…
DEG DEG+DAAWO: Kenya oo diyaarado dagaal u soo dirtay Somalia,Xiisada…
DEG DEG+FIIRSO: Maxaadan Ogeyn oo ka cusub Xiisada siyaasadeed ee…